အွန်လိုင်းဓာတ်ပုံများမှတရားမျှတမှုမလုပ်ကြပါဘူး မှော် Cinque Terre အီတလီမှာရှိတဲ့ဒေသ. တောင်ထိပ်၏ရောင်စုံအိမ်များ, စပျစ်ဥယျာဉ်များကဝိုင်းရံ, ဒေသခံစားသောက်ဆိုင်များ, နှင့် တောင်တက်လမ်းကြောင်း, အားလုံးသည်ဤဒေသကိုဥရောပ၌အံ့သြဖွယ်ကျဆုံးသောခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်. Cinque Terre အမှန်တကယ်ပါဝင်သည် 8 သေးငယ်တဲ့ရွာ ထို့အပြင်ရထားလမ်းတစ်ခုလုံးသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်သွယ်ပေးသည်. ၎င်းသည်ကျေးရွာများသို့လည်ပတ်ရန်အထူးလွယ်ကူစေသည် 2-3 သင်အချိန်တိုတောင်းလျှင်ရက်ပေါင်း. ကျဆုံးခြင်းသည်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုတွင်ရထားပြေးလမ်းပေါ်မှခုန်ဆင်းခြင်းထက်ပိုကောင်းသောအရာဖြစ်နိုင်သည်?
Rissbachtal ချိုင့်နှင့် Karwendel Alpine ပန်းခြံ, ဆောင်း ဦး ရာသီအပန်းဖြေခရီးထွက်ရန်အတွက်သြစတြီးယားနိုင်ငံ၏ခမ်းနားထည်ဝါသောခရီးစဉ်ဖြစ်သည်. Ahornboden ၏ Alpine မြေပြင်အနေအထားရှိပါတယ် 2,000 နှစ်နှင့်ချီသော Sycamore-Maple သစ်ပင်များသည်သူတို့၏ဆောင်း ဦး ရာသီ၌ရွှေရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင်ဝတ်ဆင်ထားသည့်အတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလှသည်. သဘာဝနှင့်တောင်တန်းများသည်ဥရောပ၌အမှတ်တရကျဆုံးမည့်ခရီးသွားရာနေရာအတွက်စိတ်ကူးယဉ်ရှုခင်းများကိုဖန်တီးပေးသည်.
အဆင့်မြင့်မီးရထားဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သင်သည်အချိန်မရွေးဥရောပရှိမည်သည့်နေရာ၌မဆိုခရီးသွားနိုင်သည်. နာမည်ကြီးမြို့ကြီးမှသည်အလွန်သေးငယ်သော၊, ငါတို့ပေါ်မှာရှိသမျှသောမြို့ 10 ဥရောပ၌တစ် ဦး ကျဆုံးခြင်းအားလပ်ရက်များအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ, has its unique charm and magic.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးကျဆုံးခြင်းအားလပ်ရက်များ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-fall-vacations-europe%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
bestfalleuropedestinations Bestfallvacationeurope fallineurope FallvacationEurope ။